Abakhiqizi nabahlinzeki be-FTTH Optical | China FTTH Optical Isamukeli Factory
I-ZHR1000SD FTTH Isamukeli Esiphezulu se-Optical
Incazelo yomkhiqizo 1 ZHR1000SD FTTH isamukeli se-optical senzelwe inethiwekhi ye-CATV FTTH. Isici sayo esikhulu ukusetshenziswa kwamandla aphansi, ukuphuma kwezinga le-AGC optical, iVolumu encane nokwethenjelwa okuphezulu. Ukwamukela igobolondo le-aluminium ingxubevange, enesiginali yokulawula i-AGC eyakhelwe ngaphakathi, isakhiwo se-compact namandla wangaphandle we-modular enza ukufakwa nokulungisa iphutha kube lula kakhulu. Kungumkhiqizo omuhle ukwakha inethiwekhi ye-FTTH CATV. 2. Isici somkhiqizo 1. Yamukela imojuli ye-GaAs njenge-RF ampli ...
I-FTTH Passive Photoelectric Converter ZHR28PD
Izici 1.Ukusebenza komkhawulokudonsa: 45 ~ 1000MHz; 2.lapho amandla wokufaka wokufaka engu -1dBm: Isiginali ye-Analog: amandla wokukhipha amandla yi-67dBµV (OMI = 4%); Isiginali ye-Digital: amandla wokukhipha amandla yi-61dBµV, MER> 38dB (EQ icishiwe); 3. Lapho amandla wokufaka wokufaka engu -10dBm: Isiginali ye-Digital: amandla wokukhipha amandla yi-43dBµV, MER> 30dB (EQ icishiwe); Kunconywa ukufakwa kwamandla we-optical optical dynamic -10 ~ 0dBm. Lo mkhiqizo unomkhiqizo owodwa we-F-type RF wokukhipha, iMetric noma i-Imperial eshiwo ...
Iphasiphothi Yokwamukela Okubonakalayo
Incazelo ZHR10P uchungechunge CATV isiguquli sethelevishini yedijithali, i-fiber ekhaya. Lo mshini usebenzisa ithubhu yokwamukela ephezulu yokuzwela, ngaphandle kokuphakelwa kwamandla, akukho ukusetshenziswa kwamandla. Kuyinto yokuhlanganiswa kwezomnotho, okuguquguqukayo, ukusetshenziswa kwe-fiber kunethiwekhi yasekhaya. Kunezinhlobo ezinhlanu zokukhethwa kwemodeli: Izici I-Operation bandwidth: 45-1000MHz; (1) Lapho amandla wokufaka wokufaka engu - 1dBm: ① Isiginali ye-Analog: amandla wokukhipha amandla yi-68dBuV (OMI = 4%); ② Bamba ...
FTTH Passive Optical Isamukeli ZHR10B
1.Okubuka konke ZHR10B uchungechunge CATV isiguquli sethelevishini yedijithali, ifayibha ekhaya. Mina umshini wakhe usebenzisa ithubhu yokwamukela ephezulu yokuzwela, ngaphandle kokuphakelwa kwamandla, akukho ukusetshenziswa kwamandla. Lapho okufakwayo kokufakwa kwamandla kwezinga lokukhipha amandla Pin = -1dBm, Vo = 68dBuV, kungasebenza ngokwezomnotho futhi ngokuguquguqukayo ukuhlanganiswa kwamanethiwekhi amathathu, i-fiber kuhlelo lokusebenza lwenethiwekhi yasekhaya. ZHR10B ukubukeka koqweqwe lwawo, kunezinhlobo ezimbili izinhlobo optical eyenziwe Ukukhetha. 2.Izici 1) Akukho Mandla adingekayo 2) Umsebenzi womkhawulokudonsa ...
Isitholi se-FTTH mini Optical nge-WDM
I-ZHR1000PD iyi-mini indoor receiver receiver eyakhiwe ku-WDM, eyenzelwe izinhlelo zokudlulisa ze-FTTP / FTTH. Iletha izimpendulo ezinhle kakhulu zemvamisa nokuphazamiseka ngomsindo ophansi, ukukhishwa okuphezulu kwe-RF, nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Kuyimodi eyodwa ye-fiber-pig tailed futhi iyatholakala ngezinketho ezahlukahlukene zokuxhuma. Isikhombisi Ayikho Incazelo Yesixhumi 1 RF OUT RF OUT1 F isixhumi 2 RF OUT2 ongakukhetha 3 PWR Power adaptha port 4 PON 1490 / 1310mn interface interface SC / PC ...
I-ZHR1000P uchungechunge FTTH isamukeli se-optical sinokusebenza okuphezulu, amandla we-receiver aphansi amandla nezindleko eziphansi zo-opharetha be-CATV abanikezela ngesixazululo sekhwalithi ephezulu nenhle kakhulu ye-FTTH yenethiwekhi. I-ZHR1000PD idizayinelwe uhlelo lokusebenza lwe-FTTP / FTTH. Ukusebenza okuphezulu, amandla we-receiver low kanye nezindleko eziphansi isisombululo se-FTTH ukukhetha okungcono kwe-MSO. I-WDM ihlanganiswe nesiginali yevidiyo engu-1550nm nesiginali yedatha engu-1490nm / 1310nm ku-fiber eyodwa. Ukucabanga kwe-1490nm / 1310nm yokuxhuma idivayisi ye-ONT. Zifanele kakhulu ...
Uhlaka I-ZHR1000MF Mini Optical node iphezulu ekusebenzeni, inokwethenjelwa, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi ngevolumu encane, futhi kuhle kunethiwekhi yeFiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). Izici • Ngesihlungi sebhendi futhi kudlula kuphela u-1550nm. • Imvamisa 40MHz -1002MHz. • I-Gallium arsenide amplifier esetshenziswe ngenkomba yokusebenza enhle. • Kukhona i-metric system (noma i-English system) imbobo yokukhipha imisakazo kanye ne-DC12V ~ 15V port ehambisa ugesi ezimele. • Small aluminium die cast casing, ubuhle ...
Amapharamitha Isici se-Optic CATV Work wavelength nm 1260 ~ 1620 1540 ~ 1563 Pass wavelength nm 1310 and 1490 Channel Isolate dB ≥40 1550nm & 1490nm Responsibility A / W ≥0.85 1310nm Receiving power dBm ≥0.9 1550nm & 1490nm + 2 ~ -10 alog Analog TV (CN ~ R10 alog Analog TV (CN) Ukulahleka okubuyayo kwe-Optical dB + 2 ~ -20 Digital TV (MER ＞ 29dB) ≥55 Isixhumi se-fiber Optical SC / APC LC / APC RF Isici Sokusebenza Komkhawulokudonsa MHz 47-1002 ...
Uhlaka I-ZHR1000M Mini Optical node iphezulu ekusebenzeni, inokwethenjelwa, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi ngevolumu encane, futhi ilungele inethiwekhi yeFiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). Izici • Imvamisa 40MHz -1002MHz. • I-Gallium arsenide amplifier esetshenziswe ngenkomba yokusebenza enhle. • Kukhona i-metric system (noma i-English system) imbobo yokukhipha imisakazo kanye ne-DC12V ~ 15V port ehambisa ugesi ezimele. • Izilingisi ezincane ze-aluminium die cast, ezimise kahle, ezilungele ukusetshenziswa ekhaya. • Sebenzisa i-SC / ...
ZHR860MF Micro Optical Isamukeli
Isicelo Fibre kunethiwekhi yasekhaya (FTTH). Isici Sebenzisa i-fiber kunethiwekhi yasekhaya. Izindlu eziqinile ze-die-cast aluminium. Isixhumi sokufaka i-SC / APC ne-RF okukhipha nge-F female connector. Ngenkomba yamandla wokufaka we-2-stage. Amandla wokufaka -10 ~ + 3dBm izinga lokukhipha 75 ~ 80dBuV. Umsebenzi wokwakha we-AGC. I-amplifier yomsindo ophansi eyenziwe kubuchwepheshe be-push-pull. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu ＜ 2.0W. Amapharamitha Performance Unit Index Optical parameter Operation wavelength nm 1550 Input power dBm ...
I-FTTH Optical Receiver eyakhelwe ngaphakathi ku-WDM ZHR860MD
Ukubuka konke i-ZHR860MD ukusebenza okuphezulu nokwethenjelwa okuphezulu kwesamukeli se-optical. Yimitshina yokutholwa ebonwa ngobubanzi obuguqukayo, eqaphela ukusebenza kwe-othomathikhi (i-AGC) yezinga lokukhipha le-RF lamasiginali wokufaka kwamandla ebangeni elibanzi njenge -10 ~ -3dBm kusekethe. Izici I-bandwidth yokusebenza kwe-47 ~ 1000MHz. Ukukhishwa kwesiginali ye-RF yomsindo owodwa, kuyonga futhi kuyasebenza. Inezinkomba zokunikezwa kwamandla namandla e-optical. Umsebenzi we-Optical auto gain control (AGC). Nge-PO ...
FTTH Micro Optical Isamukeli ZHR100L
Ukubuka konke i-ZHR100L Mini Optical Node iphezulu ekusebenzeni kwayo, inokwethenjelwa, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ngevolumu encane, futhi ilungele inethiwekhi yeFiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). 2.Izici 1) 1310nm kanye no-1550nm iwindi lokusebenza ongalikhetha 2) Imvamisa 40MHz -1002MHz 3) Isikhulisi seGallium arsenide esisetshenziswe ngenkomba yokusebenza enhle. I-4) Kukhona i-metric system (noma uhlelo lwesiNgisi) imbobo yokukhipha imvamisa yomsakazo kanye ne-DC12V ~ 15V port ethembekile yokuhambisa ugesi. 5) Aluminium encane die cast c ...